Maxaa ka jira in xubin sare oo Shabaab ah lagu dilay Duqeyn ka dhacday Sh/Hoose? – Hornafrik Media Network
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay duqeyn ay sheegtay inay fuliyeen ciidamadeeda iyo kuwa Mareykanka oo is kaashanaya, taas oo galabtii Talaadada ee shalay ka dhacday deegaanka Kuunyo Barrow ee gobolka Shabeellada Hoose.
Warka ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in howlgalkaas lagu dilay xubin sare oo ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxayna dilka ruuxaas oo aysan shaacin magaciisa iyo teytalkii uu ku dhex lahaa Al-Shabaab ay ku macneeyen inuu hoos u dhigi karo awoodii ay Al-Shabaab weerarro uga soo abaabuli halaayeen aagga Kuunyo Barrow.
Sidoo kale warbixinta waxaa lagu sheegay in qiimeyn la sameeyay duqeynta kadib lagu ogaaday inaysan jirin waxyeelo ka soo gaartay dad rayid ah.
Ugu dambeyntii warka ay dowladda Soomaaliya ka soo saartay duqeyntaas waxay ku sheegtay in ciidanka amniga Qaranku ay sii wadayaan cadaadiska iyo weerarada culeyska lagu saarayo dagaalamayaasha Al-Shabaab, isla markaan dowladda federaalka iyo la-hawlgalayaasheeda ay wiiqeen inta badan awoodii ururada ka soo hor jeeda ee ka dagaalama dalka.
Dhinaca kale Al-Shabaab oo war ka soo saaray isla duqeynta ka dhacday Kuunya Barrow waxay sheegeen in duqayntaas lagu dilay ruux shacab ah oo wax wada shaqeyn ah aan la laheyn Al-Shabaab.
Ninka la dilay oo ay ku sheegeen ganacsade caan ka ahaa deegaanka ayey magaciisa ku soo koobeen Ismaaciil, sidoo kale qoraalkooda waxay ku muujiyeen inaysan jirin cid kale oo waxyeelo ka soo gaartay duqayntii ka dhacday Kuunya Barrow.